Allgedo.com » Naftaa igu kaa qasbeysee, uma qalantid Caashaqa (Qaybtii 1aad) – By Adan Jama Kahin
Home » Rayi » Naftaa igu kaa qasbeysee, uma qalantid Caashaqa (Qaybtii 1aad) – By Adan Jama Kahin Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Qisadani waa sheeko dhab ah oo Jacayl xanuunbadan xambaarsan. Sheekadanina waxa ay ku dhacday wariyaashii sanadadii todobaatanada ila sideetanada kuwii ugu caansanana mid ka mid ah barigaa oo loo yaqaan Abdala Nuuradin ala ha u naxariiste ee. Waxanu sida la ogyahayba uu ahaa nin wariye ah oo aad u codmacaan, isla markaana ah hal abuure. Waxa heesaha uu ilafay badankooda qaada Fanaanka loo yaqaan cumar shooly oo isna ah fanaan ka tirsan Hobalada waberi, kaaso qaadi jiray heeso uu alifay Cabadal oo ay ka mid tahay ta imika kor ku xusan.
Abdala Nuradiin wuxu ku soo koray dhulka loo yaqaan Somali Galbeed magaalada JigJiga kadibna xagaa iyo Muqdisho ayay isaga iyo walaashiiba u soo wareegen. Wuxu ahaa wariye la jecelyahay hadaan idin xasuusiyo barnaamujadii uu ka sheegi jiray Radio muqdisho, Somaliya wax ka mid ahaa barnaamujka imaqashii I madadaali oo ay isla daadihin jireen isaga, wariye Ahmed Hassan Cawke iyo Luul Ali Hassan (Luula) waxa intaa u dheerayd isagoo Cabdale ahaa jilaa wax ka metela ruwaayadihi Kooxda Banadir oo ay ugu danbaysay ruwaayadii loo yaqaanay (Shumeey) ee aadka looga wada helay. Waxa kale oo ay isaga iyo Cawke hadana si wada jir ah u sheegi jireen barnaamujka ciyaaraha kooxaha Seera A iyo Qarankaba.
Wakhigaa aan sheegayo wadankuna barwaaqu ahaa, dadkuna dad aad isu jecel bay ahaayeen. Hadaba, waxa dhacday in Cabdala Nuuradin uu jeclaaday Inan aad u qurux badan, dheer, indhaqurux leh, socod macaan, hilib meel dhexaadana leh iyo waliba cod aad u macaan oo ku soo jiidanaya adiga, kaasoo ay ku soo ifbaxayan akhlaaq wanagsan, ixtiraan iyo degananshaba. Wuxu ku arkay Cabadale sida la sheegay suuqa iyadoo kaligeed maraysa. Wuu ka dabategay waxanu isku dayay inuu iska dhigo nin aan garanayn Bangiga dhexe ee Centrale kaa soo aan sida uga fogayn halka. Wuxu waydiiyay inantii (gabahdi) iga raali ahaw Abaayo ma ii tilmaami karta adigoo raaliya meeshu uu ku yaalo Bangiga dhexe ee Dawlada. Waxay ku tidhi haa Aboowe macane oo wuxu ku yaala halka danbe Shaneema Xamar ka danbaysa. Wuxu yidhi waad mahadsantahay Abaayo, laakin mid kale Abaayo an kuwaydiiye ee meel baan hore kuugu arkay mise talaw waa qofkale miyaad adigu ka shaqaysa Somali Airlaynta, waxay tidhi may Abowe malaha qof kalaad aragtay. Wuxu ku yidhi Abaayo adigoo iga raaliya gabadh fiicanbaad tahay ee ma ii sheegi karta magacaaga iyo meesha ku nooshahay markiiba magaceedi iyo meeshi ay degenayd ayay u sheegtay.
Halkaa ayay arrinta kulan kii hore ku dhamaatay, hadaba inanta ama (gabadha) qofba siduu u yaqaanaba. Waxa dhalay Aabo Somaliya iyo Hooyo Hindiyad ah. Waxa inanta walaalo ahaayeen ila dhawr caruur ah oo yar yar ah. Waxay inanta reerkeedu degenaaayeen Xaafada Via Liberia ee ka tirsanayd degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho.
Abdala markiiba jacelyba baa duxay wuxu markiiba in uu heeskii ugu horeyay uu ka tiriyo inanta , taasuu uu ku amaanaya qurxdeeda, socodkeeda iyo akhlaaqdeedaba, waxa heesta markii ugu horeyay laxanka iyo luuqdaba ku heesay Fanaanka Cumar Shooli, waxana ka mid ah ereyadeeda (ma iyadoo kaleeta , aqalala gelaya…..).
Sidaan la wada socono, bariga wadanka Telephono sidaasi majirin, marka A. Nuradiin wuxu soo mari jiray xaafada agteeda marwalba aanu shaqaynayn bal si uun mar uun idhihiisu inanta u qabtaan. Maalin Khamiis ah oo ay casarku sii degaayo qoraxduna heer kulkeedu dhexdexaad yahay saacaduna tahay ila 4 tii galabnimo ayuu soo agmaray xaafada dukaan u dhaw si uu arko inantii (gabadhii) isagoo halkaa markii horena dhawr jeeroo horena ku hungoobay. Nasiib wanaag, isagoo xagii gurigeeda eegaya ayay dukaanki ka soo baxday si lama filaan ah. Markuu arkay wuu naxay oo markiiba salaam ayuu boobsiiyay Abaayo see tahay, waxay tidhi aboowe nabada ma wiilki maalinkii baad tahay haa uu wuxu yidhi waxan ahay Cabdala Nuradiin. Haa aboowe codfiican baad leedahay oo waxan dhegaystahay Radio Muqdisho wuxu yidhi waad mahadsanthay.
Inta ha inoo joogto qaybt 1aad, lana soco qaybta 2aad.
Waa Qalinkii: Adan Jama Kahin